Plugin bokotra fizarana sosialy tsara indrindra ho an'ny WordPress | Martech Zone
Alatsinainy Oktobra 13, 2014 Douglas Karr
Herinandro vitsivitsy lasa izay, nisy olona tao amin'ny tambajotranoko Facebook nanontany hoe inona ny plugins bokotra fizarana sosialy tsara indrindra any WordPress. Tiako ny fahatsoran'ny JetPack's Publicize ary ny zava-misy fa novolavolain'ireo programmer Automattic (mpamorona WordPress); na izany aza, na ny toeran'ny mpampiantrano ahy na ny plugin sasany dia nahatonga ny popup fizarana ho zava-poana (misaotra an'i Michael Stelzner noho ny fanondroana an'io!). Mbola mampiasa ny plugin aho handefasana atiny amin'ireo tambajotra sosialy, saingy tsy mampiasa ny bokotra fizarana ao amin'ilay tranonkala intsony aho.
Nampiasainay koa ny Flare plugin izay nahagaga. Na izany aza, nandao ny plugin ny orinasa ary mivarotra ny bokotra fizarana sosialy ho famandrihana. Tsy mandeha tsara ny serivisy ary tsy nitsaha-nitombo ny olana ary nafoiko izy sy ilay plugin. Ratsy loatra satria ny iray amin'ireo fiasa lehibe dia ny fahafahako mahazo ny fizarana rehetra amin'ny lahatsoratra rehetra ary namorona kaody aho handefasana azy ireo any an-kafa amin'ny môdely mba hitaona olona maro hamaky.
Noho izany, ny fihazana dia teo amin'ny plugin WordPress iray lehibe izay afaka manome bara bokotra azo amboarina tsara sy safidy maromaro. Nanao famakiana sy fanandramana plugins sy vokatra am-polony maro aho ary nifarana tamin'ny fividianana ny Tsotra bokotra fizarana ara-tsosialy ho an'ny WordPress.
Tsy ny plugin no mora indrindra manamboatra sy manamboatra azy, fa ny mpamoha angatra anatiny dia tsotra ary ny safidy mandroso dia be dia be, anisan'izany ireo widgets manaraka ny fiaraha-monina ary na dia ny analytics fizarana sasany aza.
Nampidiriko tao amin'ity lahatsoratra ity ny rohy ifandraisanay - sintomy ny Tsotra bokotra fizarana ara-tsosialy ho an'ny WordPress ary avelao ny mpamaky anao hampiroborobo anao!
Tags: bokotra facebookbokotra google +bokotra sosialyplugin plugin bokotra sosialybokotra sosialybokotra fizarana sosialy bokotra fizarana sosialy bokotra fizarana sosialy tsara indrindrametatra fizarana sosialyplugin plugin fizarana sosialybokotra twitterplugin WordPress
Yesmail dia manampy trangam-pitaterana mailaka ivelany ho an'ny fanatanjahan-tena sy ny toetrandro